အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အင်းဝပြတိုက်တွင် အင်းဝနန်းမြို့ ပုံစံငယ် အပါအဝင် အင်းဝခေတ?? - Yangon Media Group
အင်းဝ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြို့နယ် အင်းဝမြို့ဟောင်းရှိ အင်းဝရှေး ဟောင်းသုတေသနပြတိုက်ကို ပြု ပြင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြတိုက်၌ပြကွက်နှစ်ကွက်ကို ထပ်မံတိုးချဲ့သွားမည့်အပြင် အင်းဝမြို့ပုံစံငယ်အပါအဝင် အင်းဝခေတ်၏အထင်ကရ နေရာဓာတ်ပုံများနှင့် ပစ္စည်းများပါ ထပ်မံဖြည့်တင်း၍ စုစု ပေါင်းအမျိုး ၁ဝဝ တိုးချဲ့ခင်းကျင်း ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းဝပြတိုက်အား ပြုပြင်၍ အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည့် ပြတိုက်အဆောက် အအုံအစိတ်အပိုင်းတချို့ကို အစားထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် ပြတိုက်ရှိ အင်းဝ ခေတ်ရုပ်ပွားတော်များပူဇော်ထားသည့် အောက်ခံပလ္လင်နှင့် ရုပ်ပွားတော်အောက်ခံခုံများ အား ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ကတ္တီပါစအသစ် ခင်းခြင်း၊ အောက်ခံခုံများအား ညှိ၍ရုပ်ပွားတော်များ တညီတည်းဖြစ် စေရန် ပြင်ဆင်ထားရှိခြင်းစသော လုပ်ငန်းများကို အဓိကထားပြုပြင် ဆောင်ရွက်နေသည်။
”အင်းဝပြတိုက်မှာ အင်းဝနှင့် ပင်းယခေတ်ဗုဒ္ဓပြခန်း၊ စာပေပန်းချီ နှင့် ဗိသုကာပြခန်း၊ လူအသုံးအ ဆောင်နှင့်လက်မှုအနုပညာပြခန်း ဆိုပြီး ပြခန်းသုံးခုထဲမှာ ပြကွက်သုံး ကွက်ပြသထားပါတယ်။ ဒီနှစ် နောက်ထပ်တိုးချဲ့ပြသမယ့် ပြကွက်ကအတွင်း စင်္ကြံနေရာမှာ အင်းဝခေတ်အထင်ကရ နေရာတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပြကွက်ပါမယ်။ ဧည့်ခန်း ဆောင်နေရာမှာ အင်းဝမြို့ဟောင်း ပုံစံငယ်ပြကွက်ပါမယ်။ တိုးချဲ့ပြသ ရာမှာ ဓာတ်ပုံကြီး၁၂ ပုံ၊ ဘုရားတံ ကဲနဲ့မုခ်ဦးများပါမယ်။ လက်ရှိပြထား တဲ့ ပစ္စည်းအရေအတွက်က ၂၆၅ ခုရှိတယ်။ တိုးချဲ့ပြသမယ့်ပစ္စည်းက ၁ဝဝ ဖြစ်လို့ အမျိုးပေါင်း၃၆၅ မျိုးအထိ ရှိလာပါမယ်”ဟု ရှေးဟောင်း ပြတိုက်နှင့် သုတေသနဦးစီးဌာန၊ အင်းဝ၊ ပင်းယဌာနစုလက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ဇော်ကပြော ကြားသည်။ အင်းဝပြတိုက်ကို တနင်္လာနေ့ နှင့် နေ့ကြီးရက် ရက်ကြီးများမှအပ နေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ပြသထားရာ ပြည်တွင်းကြည့်ရှုသူများအား ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တစ်ဦးလျှင် ဝင် ကြေးကျပ် ၅ဝဝဝ ကောက်ခံကြောင်း သိရသည်။
အောင်လံမြို့နယ် သမိုင်းဝင် ကုသိနာရုံဘုရားကြီး မြတ်စွယ်တော်ကို ကရဝိက်ဖောင်တော်ဖြင့် မြို့?
ခြေစွမ်းပြနေသော ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ကို မန်ယူအသင်း လစာတိုးပေးမည်၊ ဆိုးလ်ရှားအား တရားဝင်နည်းပြအဖြ?
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် (၂၆)ရပ်ကွက်ရှိ ဝတ်ပြုဆောင်ကို တရားဝင်ဗလီ ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးပေးရန် မိုက်ကယ်ကျော်မြင့် တင်ပြချက် တရားရုံးပယ်ချ